Kusukela sezindiza "Dalaman" isigamu sehora eya ehhotela Orient Resort Ihhotela 4. Marmaris - yokungcebeleka Mediterranean kuthandwa kakhulu. izivakashi ezisanda kufika ezibekwe ngokushesha lapho ngifika, ngeke kulindeleke. Leli hhotela ezikhangayo izivakashi, abathanda ongaphandle, abafuna ukuthenga Solid round umnotho.
Ingqikithi yezindleko iviki ukuvakasha ezimbili (7 nobusuku obungamashumi amane) - ruble 42 500. Ngo isitayela zokungcebeleka Mediterranean European, ukuphumula kwi insimu enkulukazi boarding indlu v12000 m 2, ihlangana hhayi kuphela ukuzilibazisa endaweni echibini, kodwa futhi kahle igcinwe engadini yangasese nge zokuhamba egandayiwe kuwo. Isakhiwo ehhotela itholakala eduze nedolobha Fethiye, e wemitha, cishe ezisemaphethelweni yayo. Kuyini Fethiye? Kuyinto - owaziwa Yachting port ngamazwe emhlabeni lapho Chic pier eyakhelwe lezizitsha romantic (Amatilosi aseYurophu Sekuyisikhathi eside abakhethiwe Bay yakhe).
Ukuze abathanda ongaphandle ejwayele ngaphandle iholidi beach, pick up, ngokusho ukunambitheka yakho, uhlelo uhambo, kukhethwa leli hhotela - ungumuntu omuhle.
«Pros» Orient Resort Ihhotela 4: a rebranding yamuva (igama endala Aries wawa lwanyamalala); esimisiwe nokuphatha ngempumelelo; kwakhiwa futhi munye njengombhangqwana ngempumelelo umyalo izikhonzi; Amagumbi kulesigaba ukulungiswa ziye kwenziwe, yonke imishini esikhundleni esisha; liqoke chef afanelekayo bakha iqembu elikhulu labapheki kanye oweta at yokudlela ehhotela.
Lezi zinguquko kwakungafanele aphuze kuthinte Ukubuyekeza ka holidaymakers. Ukufunda kubo, ukuhlukanisa ngokucacile emgqeni kuyoshaya phakathi "phambi" futhi "ngemva."
Ihhotela ngeke ukulungisa
Nebubi of ihhotela Orient Resort Ihhotela 4, ngokuvumelana ngokubona holidaymakers zincane futhi yesikhashana. Lena - isidingo nesimanje isakhiwo, okuyinto, ngokusho Amacebo izivakashi ehlobo ngokwabo (njengoba kungekho intuthu ngaphandle umlilo), kuhlelelwe for the nobusika 2014/2015 GG.
Yazi ukuthi izinga lenkonzo kanye nenhlangano yempesheni yabo prostoyaltsev, eyinkimbinkimbi hhotela esikalini ngemva rebranding isivele out kolayini yesimanje. Futhi isaphulelo ekuqaleni linamathele intengo nohambo, ukuba qotho ezingaphezu kuka offset ethile eshiwo ngenhla. Ngakho-ke ukuzilibazisa abathanda isizini velvet (ozobakhona kuze kube sekupheleni kuka-October) - ezisheshayo: sicabangela eziyinkimbinkimbi Isaphulelo hotel aligcini omkhulu-value uhambo. Mhlawumbe yilesi sizathu esenza, abafisa ugcine ku amamenyu ngokweqile animations ecasulayo for ukuthengwa hambo ezithakazelisayo, kunengqondo ukukhetha Orient Resort Ihhotela 4.
Ihhotela e Riviera Turkish
Coast Mugla yesiFundazwe, lapho kubhekwa yithi ehhotela, nasogwini esifundazweni Antalya is ngokwethukela ebizwa ngokuthi Riviera Turkish (abalingisa French Riviera). Le ngxenye inkanyezi yezwe kanye ucezu e samaholidi unyaka ngamunye izivakashi ezingaba yizigidi ezingu-13 ezivela emazweni ahlukahlukene. Lwenza yokungcebeleka ingqalasizinda ezinkulu, enikeza ukuthi kungenzeka spa ukuphumula induduzo yimuphi usaziwayo, kukhethwa izivakashi.
Lokhu Riviera ubizwa wageza ngasemanzini zase-Aegean seMediterranean kwezilwandle. Athelelela ka-Aegean Sea inikeza amathuba ebhishi umndeni namaholide ka Fethiye. Orient Resort Ihhotela 4 itholakala endaweni owaziwa amabhishi emhlabeni - Calis, Calis lolwandle esiqhingini Chevalier. Leli zwe ihlobe hhayi kuphela kolwandle, kodwa futhi Izintaba namahlathi ... Kukhona kungenzeka izinkambo waqondisa ukuvakashela nezakhiwo eziningana endala. Idolobhana Fethiye, has a umbukwane omuhle sikhathi sinye bay yayo langa, iziqhingi sogu lolwandle, kuhlanganise esiqhingini saseRhodes, edonsela abalandeli emhlabeni paragliding emhlabeni (indiza ku-parachute isikebhe ekhethekile towed). Holidaymakers kodwa iholidi okukhazimulayo, lapha ulindele Isimiso esigcwele semisebenzi ongaphandle: omhlophe Rafting amanzi nemifula entabeni, futhi uhambo ezinkangala engibaziyo. Mhlawumbe, kuwe (ikakhulukazi uma abafundi - abesifazane abasebenzisa izimonyo ezifanele) wezwa yoLwandle Olufile (Oludeniz). Lokhu Yingakho zemvelo edumile emhlabeni wonke nje etholakala lapha: amakhilomitha 14 kusukela Fethiye. Yilokhu esikubiza ukuchaza ngokuningiliziwe kamuva kulesi sihloko.
Njengoba sishilo ngenhla, embonini resort eTurkey ngokwesiko indawo emndenini namaholide ka Fethiye kubhekwa. Orient Resort Ihhotela 4 - ihhotela akuyona omkhulu hhayi ezincane - ophansi. Itholakala ikhilomitha ukusuka edolobheni futhi itholakala emgqeni wokuqala, amamitha angu-50 kuphela uwahlukanise kusuka ebhishi Calis. Beach nakuba kungabi enesihlabathi esiningi, kodwa ukhululekile kakhulu bahambe bengafaké zicathulo, embozwe amatshe ngomzuzu. Le mpahla ngobukhulu isilinganiso kuhlanganisa isakhiwo emine storeyed nge mbumbulu ezimbili (kusukela ngomuzi endaweni pool) nge echibi elikhulu unxande main, compact umdlalo pool amaslayidi, egwedla pool elise phezu kolwandle.
Ngecala lasentshonalanga saseMpumalanga Resort Ihhotela 4 yehhotela ehlotshiswe ecasukile izingadi manicured ngokucophelela. Kukhona in a eziyinkimbinkimbi ehhotela kanye ebhishi yangasese, kude 1 km, okuyisona free Shuttle Ihhotela. Bobabili ebhishi - akukho isihlabathi, amatshe dibikeza them. Nokho, amatshe phambi esihle ukuthi ngokuphazamisa uhamba bengafaké zicathulo ku it is hhayi wazizwa.
umzimba Ubude ehhotela Orient Resort Ihhotela 4 (Fethiye) izinombolo 150. Amakamelo kuvulandi, kanye nekamelo lokugezela ne yangasese. Plumbing zangasese - at kokuwa, sifaka noma eshaweni Amatebhe noma ukugeza ngezinsalela obishini. Njalo ukusebenza ngamunye-moya, amakamelo - yesimanje LCD TV. Kukhona ucingo, umshini wokomisa izinwele, khulula mini-bar. Mhlawumbe ukusetshenziswa ephephile - ngoba imali.
Isibhakabhaka egumbini alondolozwa ngaphakathi umnotho, okuyinto sici for 2004 (lapho yesibili eyenziwa ukulungiswa ezinkulu). Plumbing KULUNGILE (salokhu abasebenzi yengamela). Esitezi - aluhlaza noma grey ukhaphethi. Izindonga kanye ophahleni zipendwe emhlophe. Imibhede, amatafula, izihlalo ukufanisa ekonomstilya isigaba bese ifaniswe ithoni ingaphakathi. Itjho bona konke lokhu ngokuqinisekile kuyoba ushintsho ebusika 2014 (ngesikhathi sesimanje of the complex hotel), kusukela Uthwale phansi ukuze ifenisha. Ngakho, inethiwekhi izindinganiso yenkampani zebhizinisi ehhotela, ke, uma sicabanga ngokunengqondo, kufanele sifinyelele ezingeni "4 +", efana owodwa uhlelo nabo hotel chains Orient Amahhotela Roxy kuyona 4 (Turkey, Kemer).
Ngesikhathi eziyinkimbinkimbi ehhotela has a yokudlela futhi Amabha amathathu. Chef zifezeke njengoba izitsha Turkish cuisine kazwelonke kanye zaseYurophu. Izivakashi ahlinzekwa amaqanda ibhulakufesi ngiyocasha, ubisi wokudla, ubisi kanye Muesli, izinhlobo eziningana ushizi, ayi, pancake, uju, ujamu. Ukudla kwasemini kanye dinner izivakashi zikhishwa esihlwabusayo isobho unamathisele, amathathu noma amane embodiments isidlo eyinhloko turkey, inkukhu, inyama yenkomo, isibindi, inhlanzi. Cishe nsuku zonke ezweni laseMpumalanga Resort Ihhotela 4 imenyu kuhlanganisa fresh nenhlanzi izitsha. It unikeza omningi bhaka amaswidi. Kodwa choice kukhawulwe izithelo, ngokubona holidaymakers, kuphela amakhabe kanye amakhabe.
Ngemva obubanjelwe nemigoqo, ashesha akuletha esikhethekile izivakashi ezivela inhlama walungisa ngokukhethekile kukhona amakhekhe ukulungele okumnandi Gozleme. Ngemva kwabo, eza ngqo ezandleni zokufuna piping hot, iholide-njalo iyahambelana ulindele ehla elimnandi esasiyoba nawo. I lezitsha futhi anikele amaholide hamburger, zonke izinhlobo amakhukhi nge ikhofi noma itiye.
Nokho, ngisho nalapho ibhulakufesi isikhathi, izingxoxo kungaba azimisele ukuthi lonke ihhotela baphupha kakade ukwenza ihlele ukuthi ezinye izinto.
Thuthukisa izwi omzimba
Ihhotela Orient Resort Ihhotela 4 Standard has konke okungenzeka ukuze izivakashi zayo ngokwabo ngokwenyama azizwe engcono, enempilo. On website yenkampani ihhotela uthi lenzé nokugcinwa holidaymakers namazinga kule nkulungwane entsha yeminyaka. Ngempela, iningi izivakashi ehlobo ukuza lapha hhayi kuphela ukuze sunbathe zibhukude kolwandle. Kubalulekile futhi ngabo ukuba ngokuphelele thikazisa ordinariness kwansuku (umsebenzi / ekhaya), uzizwe enempilo, abasebasha, nivuthulule ukukhathala. Yingakho-Orient Resort Ihhotela Ihhotela 4 (Turkey) umsebenzi ezikhokhelwayo mahhala kumasevisi we zokwelapha. Mahhala letingabhukusha ibanga echibini, kubangele ukuba umzimba iphimbo phezulu sauna, beqondiswa abaqeqeshi ukwenza ukuqina, ukuthola emihle amanzi amaslayidi, amanzi Ukuvivinya umzimba ngendlela, polo yamanzi.
Ihhotela usebenza ejimini esine simulators professional, lapho wonke amaqembu ayinhloko imisipha kungenziwa qualitatively zifezeke beqondiswa umqeqeshi.
Ngaphansi ashukumisayo ukuzijabulisa khulula: imicibisholo, amabhiliyade - nazo kutshalwa emazweni aseMpumalanga Resort Ihhotela 4. lezivakashi Izibuyekezo ngomthelela ithoni omzimba njengoba omuhle. amakhono Intellectual baqeqeshiwe ezihlukahlukene umdlalo izimo. Lo msebenzi Kusiza ekudambiseni ukucindezeleka futhi uphumule, okuyinto ewusizo kakhulu kubo bonke.
Nokho, Animators wasungula izakhi wokuncintisana azifundiswa kula makilasi okufunda. umoya wokuncintisana, ukuzibamba, ikhono ukwakha isu, ukuhlonipheka ... Yini umsindo - "? iqhawe ngesikhathi amabhiliyade"
Leisure izingane ehlotshiswe amandla Umusa Animators nisebenzise iso lengqondo. Amakhasimende kulencane ukwazi ehhotela ngegama. Ziyakwazi lapha - lezi zivakashi isikhundla esihlonipheke kunazo zonke. Ukuze yamasevisi abo - ichibi zezingane inkundla. Ngaphambi kwasemini nabo wahlanganyela kusuka 10-00 kuya 12-00, futhi ntambama - ne 14-30 - ukuze 17-00.
Kanye Animators, bakhwele kumaslayidi amanzi, play imicibisholo, i-basketball, Bochu. Ngezikhathi zakusihlwa ngoba holidaymakers abasha ukuhlela mini-disco futhi party. Bathatha imidlalo zemfundo.
Ngesikhathi sasehlobo, ihhotela usebenza yokudlela ehlobo izingane. imenyu Wezingane kanye nekhono ukuzizwa ngokwami "amaklayenti sina" siphakamisa ukuzethemba zezingane, ngakho - kubanikeza
Ngesikhathi eziyinkimbinkimbi ehhotela siphela spa Pure. Lena - liyisiphephelo wangempela ngokuthula nokuzwana. It inikeza izihambi ubuchwepheshe ehamba phambili for ukunakekelwa kwesikhumba kanye umzimba. Ukuze kwenziwe ngcono, ithoni wasebenzisa nezindlela Cosmetology wezokwelapha. Thai massage, Ayurvedic ukwelashwa, ukwelashwa itshe nomzimba ezisonga e Hammam - zonke etholakalayo kakhulu isabelomali Izindleko izivakashi Orient Resort Ihhotela 4.
Yiqiniso evamile ye massage, eyenziwa ongoti, ivamile phakathi izivakashi. ephulukisa umphumela esiyitholayo kusukela session wesibili noma wesithathu. Ukuze uthole imali ku eziyinkimbinkimbi ehhotela, ungakwazi ukufinyelela fast ngokwanele-Wi-Fi. izitsha Exotic-Turkish futhi Mediterranean, inkokhelo kungenziwa yayala at yokudlela kwirekhodi.
Uhlelo of hambo kwezivakashi ukuhlala ehhotela Orient Resort Ihhotela 4 Standard, kuhlanganise uhambo uze uyofika oLwandle Olufile - indawo eyingqayizivele ngempela emhlabeni. YoLwandle Olufile azikho amagagasi ngenxa anezakhi ezikhethekile yamanzi. Thatha ithuba zibhukude wendawo Blue Lagoon, ngoba ingenye yezindawo enhle kunazo zonke emhlabeni.
Njengoba ubona kusukela ukubuyekezwa, ukuvakasha kuya Amanxiwa omuzi Sikasawoti drevnelikiyskogo Kugxilisa izivakashi Orient Resort Ihhotela 4. Izibuyekezo zezivakashi Ziyathakazelisa. Cishe zonke Iye yaba khona akhulume ngengxenye eyinhloko edolobheni lasendulo --Acropolis engasenyakatho. Memorial emathuneni eziningi ngokubabazekayo, oqoshiwe zibe emadwaleni,. The best eyaziwayo kubo futhi wabhekisela kule Epic kuyinto bobukhosi ethuneni Hero Bellefrofonta, ngokuwina silo nomlilo-ukuphefumula Chimera.
Lapha esigcawini, lapho kukhona amanxiwa enkundla, ehlalisa izibukeli ayizinkulungwane ezimbili ... It is lapha ukuthi kwaba lasendulo Imidlalo yama-Olympic, njengoba into zomlando, ngalesosikhathi dlweza e-mlando nasemlandweni wanamuhla Pierre Coubertin!
Izivakashi umxhwele zemvelo wendlale eyinkimbinkimbi Pamukkale travertine zokugeza, idolobha itshe eKhaphadosiya.
emathuneni Ngokubabazekayo Lycian Myra, St Nicholas Church Demre futhi leso siqhingi isimo esingavamile Kekkova munye ethandwa kakhulu Country Star futhi Crescent uhambo uhambo.
Okwamanje inikeza izinkambo ulingeke ukuzilibazisa esebenzayo Ihhotela Orient Resort Ihhotela 4 (Fethiye). Izibuyekezo lezivakashi khona nokuhebeza. Abantu zisikisela ukuthi izimo ohlongozwayo ehhotela eziyinkimbinkimbi Pension wanelisekile ikakhulukazi nokugembula izivakashi namanzi ezemidlalo abathanda. Nokho, Ihhotela likuvumela izindawo ezinhle kuze kube iholidi ngaphambi umndeni. Rebranding nomthelela omuhle izinga lenkonzo zezivakashi we izisebenzi ehhotela eziyinkimbinkimbi.
Ilyssion kuyona 3 *. Greece Ihhotela Ilyssion kuyona (Rhodes) izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
I-Federation Council ... Amalungu e-Federation Council
Ngaphandle inkomba ziya echibini noma unyawo
Izizinda Ze amazwe, izindawo, isihloko: yini ukukhetha?